253MA / UNS30815 ပြား - တရုတ် Saki သံမဏိ
Skype ကို: saky.steel
253MA / UNS30815 ပြား
ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ဟိုင်း Ningbo ရှန်ကျန်း
2 သတ်မှတ်ချက်များ 53MA ပန်းကန် :
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: ASTM A240 / ASME SA240
အရှည်: 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc
အထူ: 50 မီလီမီတာမှ 0.3 မီလီမီတာ
နည်းပညာ: Hot ပန်းကန် (HR) ရှင်းပြီ, အေးစာရွက် (CR) ရှင်းပြီ
Surface က Finish ကို: 2B, 2D, BA, No.1, NO.4, NO.8, 8K, မှန်, ဆံပင်လိုင်း, သဲပေါက်ကွဲမှု, Brush, ဖဲ (ပလတ်စတစ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် coated) စသည်တို့ကို
ကုန်ကြမ်း Materail: POSCO, Acerinox, Thyssenkrup, Baosteel, TISCO, Arcelor မစ်တယ်လ်, Saki သံမဏိ, Outokumpu
Form ကို: ရိုးရိုးစာရွက်, ပြား, ပြားချပ်ချပ်, etc
သံမဏိ 253MA Sheet များ & ဟင်းပွဲများ Equivalent အတန်း:
စံ WERKSTOFF ရော်ဘာ။ မာခ်သတ်မှတ်ပေးထားခြင်း UNS
253MA Sheet များ, ဟင်းပွဲများဓာတုရေးစပ်သီကုံးနှင့်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ (Saki သံမဏိ):
grade ကို C CR MN si : P S က N ကို ce Fe ni
20.0-22.0 0,80 max ကို 1.40-2.00
0,040 max ကို 0,030 max ကို 0.14-0.20 0.03-0.08 ချိန်ခွင်လျှာ 10.0-12.0
ဆန့်နိုင်အား အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိ (0.2% အော့ဖ်ဆက်) (2 ၌။ ) elongated
2. ငါတို့သည်လည်း Reworks, FOB, CFR အ, CIF နှင့်တံခါးကိုပေးပို့စျေးနှုန်းများမှတံခါးကိုဆက်ကပ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အတော်လေးချွေဖြစ်လတံ့သောတင်ပို့များအတွက်သဘောတူညီမှုလုပ်ဖို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။
3. ကျနော်တို့များကိုအဆိုပါပစ္စည်းများညာဘက်ကုန်ကြမ်းစမ်းသပ်လက်မှတ်ကနေနောက်ဆုံးရှုထောင်ကြေညာချက်ရန်, လုံးဝသက်သေဖြစ်ကြ၏။ (အစီရင်ခံစာများလိုအပ်ချက်အပေါ်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်)
4. ငအာမခံချက် 24hours အတွင်းတုံ့ပြန်မှုပေးစေခြင်းငှါ (များသောအားဖြင့်အတူတူပင်နာရီအတွက်)
5. သင်ဟာနိုင်ပါတယ် ထုတ်လုပ်အချိန်အသေးအဖွဲနှင့်အတူစတော့ရှယ်ယာအခြားနည်းလမ်း, ကြိတ်ပေးပို့ရယူပါ။
6. ကျနော်တို့အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထံအပ်နှံကြသည်။ ကအားလုံးကိုရွေးချယ်စရာဆန်းစစ်ပြီးနောက်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်လျှင်, ငါတို့သည်ကောင်းသောဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးဖန်တီးတံ့သောအယူမှားကတိတော်များကိုအောင်အားဖြင့်သင်တို့ကိုလှည့်ဖြားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
(ဖျက်လိုဖျက်ဆီးနှင့် Non-ဖျက်လိုဖျက်ဆီးနှစ်ဦးစလုံးအပါအဝင်) Saki သံမဏိ'S အရည်အသွေးအာမခံချက်:
1. Visual Dimension စမ်းသပ်ခြင်း
2. စက်မှုဆန့, elongated နှင့်ဧရိယာ၏လျော့ချရေးနဲ့တူဆန်းစစ်။
6. Pitting ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစမ်းသပ်မှု
8. Intergranular ချေးစမ်းသပ်ခြင်း
10. Metallography စမ်းသပ်စမ်းသပ်ခြင်း
ထုတ်ပိုး Saki သံမဏိ'S:
ကျွန်တော်တို့ဟာထုပ်ပိုးနှင့် ပတ်သက်. အထူးစိုးရိမ်ကြောင်းထားနိုင်အောင် 1. Pack, အထူးသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောလိုင်းများမှတဆင့်ပစ္စည်းအဟောင်းလက်ခံ Pass နှင့်အဆုံးစွန်ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိဖို့ရာနိုင်ငံတကာတင်ပို့ရောင်းချမှု၏အမှု၌အတော်လေးအရေးကြီးပါတယ်။
2. Saki သံမဏိရဲ့ထုတ်ကုန်အပေါ်အခြေခံပြီးမြောက်မြားစွာနည်းလမ်းတွေ၌အကြှနျုပျတို့၏ကုန်စည်ထုပ်ပိုး။ ကျနော်တို့ကဲ့သို့သောမျိုးစုံနည်းလမ်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုး,
အဆိုပါ 253Ma အလွိုင်းကိုအောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး:
253MA မြင့်မားပုတ်ခွန်အားနှင့်ကောင်းသောချေးခုခံလိုအပ် application များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့အပူခံနိုင်ရည် austenitic သံမဏိဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏လည်ပတ်မှုအပူချိန်အကွာအဝေး ~ 1100 850 ဖြစ်ပါတယ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်။
253MA ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုကို C, အလွန်မြင့်မားတဲ့ဓာတ်တိုးခုခံ, °သံမဏိ 850 ၏အပူချိန်အကွာအဝေးအတွက်အသင့်တော်ဆုံးပြီးပြည့်စုံသောဂုဏ်သတ္တိများ° C-1100 ရှိစေသည်သောပါဝင်တယ်နှင့်စကေးအပူချိန် 1150 အထိဖြစ်ပါတယ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လျက်ရှိ၏ အလွန်မြင့်မားသောပုတ်ခုခံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပုတ်ကှဲထှကျအစှမျးသတ်တိ; အများဆုံးဓါတ်ငွေ့ရောနေသောပြောင်းလဲမှုမီဒီယာအတွက်ချေးတိုက်မှမြင့်မားသောအပူချိန်ချေးများနှင့်ယဉ်ပါးဖို့ကောင်းသောခုခံ; မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာမြင့်မားသောအထွက်နှုန်းခွန်အားနှင့်ဆန့အစှမျးသတ်တိ; ကောင်းသော formability နှင့် weldability ပြီးတော့အလုံအလောက် machine ။
အဆိုပါ alloying ဒြပ်စင်ခရိုမီယမ်နှင့်နီကယ်အပြင်, 253MA သံမဏိကိုလည်းသိသိသာသာင်း၏ဓါတ်တိုးစွမ်းရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်သည့်ရှားပါးဒြပ်စင်တစ်မျိုး၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏ (ရှားပါး earth metal, REM), ပါဝင်သည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ပုတ်ဂုဏ်သတ္တိများတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ဤသံမဏိပြည့်စုံ austenite အောင်ကဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းခရိုမီယမ်နှင့်နီကယ် contents တွေကိုအတော်လေးနိမ့်ပေမယ့်, ဒီသံမဏိမြင့်အလွိုင်းအလွိုင်းသံမဏိနှင့်နီကယ်-based လွိုင်းကဲ့သို့တူညီသောမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ဝိသေသလက္ခဏာများအများအပြားရှိပါတယ်။
253Ma applications များ:
253MA ကျယ်ပြန့်, အပူကုသမှုမီးဖိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, တွင်းထွက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများပစ္စည်းကိရိယာများ, ပစ္စည်းကိရိယာများ, သံမဏိအရည်ပျော်, မီးဖိုများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သတ္တုများပုံသွန်းပစ္စည်းကိရိယာများမီးဖိုပေါက်ကွဲမှု, လှိမ့်စက်များ (မီးဖိုမှာအပူ) sintering အတွက်အသုံးပြုသည်။
ယခင်: Hastelloy ကို C-4
253 Ma သံမဏိစာရွက်
UNS S31803 F51 ဒျူပလက်သံမဏိက Round ဘား